Ibhetshi yokuqala yentsimbi ye-Baotou yeetoni ezingama-5 000 ifikelela kwintengiso “yelifu” - China Foshan Hermes Steel
Ibhetshi yokuqala yentsimbi yeetoni ezingama-5 000 ifikelela kwintengiso “yelifu”
Ngomhla wesibini kweyoKwindla, iBaotou Steel Sales Company yatsho ukuba ibhetshi yokuqala yentsimbi yeetoni ezingama-5 000 yayisandula ukufezekisa intengiso “yelifu”, neyaphawula ukuba iileyili zeBaotou Steel ziye zatsibela “efini” ngexesha elinye.
Intsimbi yeBaotou ibekwe kwisiXeko saseBaotou, kwiNgingqi yangaphakathi ye-Mongolia. Yenye yeziseko zokuqala zentsimbi ezakhiwe emva kokusekwa kweTshayina eNtsha. Ukuba neenkampani ezimbini ezidwelisiweyo, "iBaogang Iron kunye ne-Steel Co, Ltd." kunye "neBaogang Rare Earth", yenye yeziseko eziphambili zemveliso kaloliwe eTshayina, enye yeziseko zemveliso yentsimbi engenamthungo, kunye nesiseko esikhulu semveliso yeplate eMantla eChina. Ikwayimvelaphi kwaye inkulu kushishino olunqabileyo lomhlaba. Uphando olunqabileyo lomhlaba lwenzululwazi kunye nesiseko semveliso.
Ngokwentshayelelo, eyahlukileyo kwindlela yokuthengisa ngokwesiko, le yibhetshi yokuqala yeentsimbi ezithengiswa yiBaotou Steel ngeNational Energy e-shopping mall.
I-National Energy e-shopping mall kuphela kweqonga le-e-commerce elizimeleyo elizisebenzelayo ngaphakathi kweQela lezaMandla leSizwe. Idibanisa ukubhida, ukubuza ngexabiso, ukuthelekiswa kwamaxabiso, kunye neevenkile ezinkulu kwinkqubo yokuthengwa kwe-elektroniki, kubandakanya izinto kwiindawo ezininzi zeshishini ezinjengamalahle, ezothutho kunye namandla amatsha. Ukuthenga kunye nokusebenza phantse iiyunithi ezili-1,400 zeQela lezaMandla likaZwelonke.
Imithombo esemthethweni ibonisa ukuba kutsha nje, iBaotou Iron & Steel ikhokele kuthethathethwano ngemodeli yesakhelo sentengiso ye-e-yorhwebo kunye necandelo elinoxanduva lommandla wezothutho weNational Energy e-shopping mall, batyikitya isivumelwano sokuthengwa kwesakhelo, esiba umthengisi kaloliwe wokuqala kwimall. Isivumelwano sigubungela zonke iinkampani zikaloliwe eziphantsi kweQela lezaMandla likaZwelonke, kunye noololiwe abasebenza nzima baka-Baotou, imizila ecinyiweyo, iileyili ezinqabileyo zomhlaba kunye nezinye iimveliso zikhuthazwe ngokufanelekileyo.
IBaotou Steel Group Corporation yathi ngesicelo esinzulu sesicwangciso se-Intanethi se-Intanethi, eli qela liza kukhuthaza intengiso eyahlukeneyo yeentsimbi. (Gqiba)
Ixesha lokuposa: Mar-17-2021